डिभोर्स पछि महिलाको कुन थर ? » Enavanari
डिभोर्स पछि महिलाको कुन थर ?
Post Views: 29,882
होटल अन्नपुर्णमा एउटा भव्य प्रोग्राम थियो त्यहाँ आउने अधिकांश पढेलेखेका मान्छेको नै भिड थियो । त्यहाँ परिचयको क्रममा मैले म जानुका ढकाल भनेर बताए । उमेरले अलि पाकै देखिन थालेछु क्यार छेउमा बस्ने महिलाले सोधिन् तपाईको माइती चाहि के थर नि ? मैले भने ढकाल । उनी पनि ढकालकी छोरी रहिछन् त्यसैले अलि चासो दिइन सायद । म त तपाई विवाहित हुनुहुन्छ जस्तो पो लागेको थियो । मैले फेरि भने म विवाहित नै हुँ एक हुर्केकी छोरीकी आमा पनि हुँ । उनी अलमल्लमा परिन् । ए अनि डिभोर्स भाको हो ? मैले भने किन तपाईले मलाई यो प्रश्न सोध्नु भयो ? कतै डिभोर्स भएको भनेर लेखिएको छ र मेरो ? उनी अक्क न बक्क भइन् सायद मेरो जवाफले उनलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला । मलाई थहाँ थियो उनको यो सबै जिज्ञासाको जड मेरो थर थियो । तै पनि अन्जान जस्तै बनेर उनको जवाफ दिइरहेकी थिए । मैले धेरै पटक खेपेको प्रश्न हो तपाईले किन श्रीमानको थर नराखेको ? विवाह पछि त तपाई श्रीमानको थरमा जानु भयो नि ? अझ थर मात्रै होइन गोत्र पनि परिवर्तन भयो रे मेरो ? मैले गोत्र भन्नु पर्दा श्रीमानको गोत्र भन्नु पर्ने रे ? एक जना माताकोमा म एक बर्ष अगाडि पुगेकी थिए । उनले मलाई धेरै कुरा सोधिन् । हुन त म माता धामीमा बिश्वास गर्दिन तर कहिले काहि आफ्ना वरपरका मानिसलाई खुशि राख्नको लागि पनि यस्ता ठाउँहरुमा अविश्वास नै सहि गइदिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ म गइदिए । माताले मलाई नाम सोधिन् अनि मेरो थर सोधिन् । मैले भने म ढकाल हुँ । मेरो श्रीमानको थर सोधिन् उनी पछाई । माताले सिधै भनिन् मैले तपाईको थर सोधेको हो माइतीको होइन । मलाइ भन्न मन लागेको थियो मैले मेरो थर भनेकी हुँ मेरो श्रीमानको होइन तर चुप लागे । यदि म त्यहाँ त्यसरी बोलेको भए उनीमात्रै होइन म सँग जाने मेरो श्रीमान पनि सायद खुशि हुने थिएनन् । मलाइ त्यहाँ विवाद गर्नु थिएन मुखलाई अलि कन्ट्रोल नै गरे । महिलालाई परिवारले के भन्ला, श्रीमानले के भन्ला, आफु बसेको समाजले के भन्ला भन्ने कुराले निकै नै पिरोलेको हुन्छ । हाम्रो समाजले यस्ता कुरा बिशेष गरि छोरी मान्छेलाई जन्मना साथ प्रशिक्षण दिन थालेको हुन्छ अर्थात हाम्रो दिमाग र मनमा यी यस्ता कुराहरु खचाखच भरिदिएको हुन्छ । अरुको लागि बाँच्ने संस्कार सिकाएको हुन्छ । आफु भोकै बसेर श्रीमानलाई र परिवारलाई खुवाउने, जस्तै अन्याय भएपनि त्यसको प्रतिकार नगर्ने संस्कार आमाबाट नै सिकेका हुन्छौ । र त्यो बाट बाहिर निस्कनको लागि त्यति सहज पनि हुादैन । हामीले चाहे पनि अर्थात महिलाको दिमागले चाहे पनि मनले त्यो स्विकृति दिइरहेको हुँदैन । अहिले महिलाको लागि थर परिवर्तन गर्नु पनि त्यस्तै बनेको छ ।
महिलाहरुलाई विवाह पछि थर परिवर्तन गराइन्छ, परिवर्तन गर्न बाध्य बनाइन्छ भने कतिपयले आफ्नो चाहनाले पनि परिवर्तन गरेका हुन्छन् । कतिपयले आफ्नो स्वार्थले पनि । कतिपयले कोटालाई प्रयोग गर्नको लागि थर परिवर्तन गर्छन् भने त्यहि कोटा नछुटोस् भनेर कतिपयले थर परिवर्तन गर्दैनन् । ए एउटा पाटो भयो यस्तो केवल शिक्षित बर्गमा नै भेटिन्छ स्वार्थ अनुाशार थर माइतीको राख्ने या श्रीमानको । एक जना महिलाले थर कै प्रसंगमा भनिन् यदि डिभोर्स भयो भने सम्पत्ति पाउनको लागि मेरो माइतीको थर नै बाधक बन्छ त्यहि भएर मैले विवाह गर्नासाथ नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्न लगाए । मैले उनलाई भनेकी थिए तपाई शिक्षित पढेलेखेकी महिला अनि आफै प्रसस्त सम्पत्ति कमाउनु हुन्छ पछि डिभोर्सनै भयो भने पनि तपाईलाई श्रीमानको सम्पत्ति लिइराख्नुपर्ने अवस्था त छैन नि यदि त्यस्तो समस्या नै पर्यो भने पनि । उनले भनिन् आफ्नो हक त लिनु परिहाल्यो नि । सम्पत्ति चाहे थोरै होस् चाहे धेरै लिन त परिहाल्यो नि ।
कतिपयले श्रीमानको नामले आफु चिनिन पनि चाहन्छन् । मैले देखका, सुनेका र मैले संगत गरेका महिलाहरुको कुराहरुलाई हेर्ने हो भने पनि थोरैले स्वार्थले र धरै जसो बाध्यताले थर परिवर्तन गरेका छन् । त्यसका विभिन्न कारण छन् त्यसलाई कोट्याउन तिर म लागिन तर मलाई सधै मनमा लागिरहने कुरा हो विवाह हुँदैमा के महिलाको आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त पार्नुपर्ने ? हरेक महिलाको आफ्नो पहिचान छ । एउटी छोरी जन्मेपछि उसलाई हुर्काउने, बढाउने, पढाउने र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने सक्षम बनाएपछि मात्रै विवाह गरिदिने चलन हाम्रो समाजमा आइसकेको छ । अर्को कुरा अहिले छोरालाई दिने शिक्षा र छोरीमा दिने शिक्षामा भिन्नता छैन । अहिले समय भनेको पहिला जस्तो छैन चेतनाको स्तर पनि निकै माथी उठिसकेको छ । छोरीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल छन् । अर्को कुरा जुन परिवारले उसलाई जिन्दगी जीउन सक्ने, आफ्नो श्रीमान, उसको परिवार र छोरा छोरीको जिम्वेवारी बहन गर्न सकने सक्षम बनाएर विवाह गरिदिन्छ त्यसपछि त्यो परिवारको लागि छोरी पराइ हुन्छ उसको सम्पूर्ण आम्दानी देखि लिएर हरेक कुरामा श्रीमान र उसको परिवारले प्रयोग गर्न पाउछ तर उसको आमा बुबा केवल उसको सफलता र उसको खुशिमा खुशि भएर आफ्नो जीवन विताउछन् भने के त्यो परिवार र आफ्नो जन्मदाको परिचय र आफुले बिवाह अगाडि बनाएको पहिचानलाई महिलाले राख्न चाहदा सहज रुपमा स्वीकार्न नहुने ? यदि कुनै कारणले उसको डिभोर्स भयो भने विवाह हुनासाथ जोडिएको नागरिकतामा रहेको थरलाई फेरि हटाएर पुरानै माइतीको थर राख्नु या छोडेको श्रीमानको ? यदि महिलाको थर विवाह पश्चात परिवर्तन गर्ने पर्ने हो भने सबैले एकपटक विवाह गरेको श्रीमान या श्रीमती सँग जीन्दगी वित्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समयमा सम्बन्ध बिच्छेदका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । त्यसतो अवस्थामा के गर्ने त ? कतिपटक उसले परिवर्तन गर्ने या त्यो सँगै नभएको श्रीमानको थरलाई अगाडि बढाउने ? अर्को कुरा गोत्रको रहयो । विवाह गर्दा पुजा ब्रामण द्धारा गोत्र सारिन्छ र उसलाई श्रीमानको गोत्र तेरो भनेर जप्न लगाइन्छ तर त्यहि महिला र पुरुषको डिभोर्सहुँदा फेरि किन त्यसैगरि पुजा गरेर मन्त्र पढेर गोत्र फर्काउन नपर्ने ? यदि पुजा गरर गोत्र सार्दा सर्ने भए डिभोर्स पछि पनि त्यहि कार्य गर्नु पर्दथ्यो । विवाह गरेर केटी श्रीमानको घरमा जाने हाम्रो परम्पराले त्यो घरका सदस्यसँग मिल्नका लागि यदि थर परिवर्तन आवश्यक हो भने यहाँ थुप्रै ज्वाइहरु पनि घरज्वाइ बसेका छन् र ससुरालीको सम्पत्ति लिएका छन् किन उनीहरुले थर परिवर्तन गर्न नहुने ? यी प्रश्नहरु अहिलेका सक्षम महिलाको अगाडि आएको छ ।
हाम्रो समाज र हामीले अभ्यास गर्दैै आएका कुरा हुन् थर परिवर्तन । यदि महिलाले थर परिवर्तन गरेन भने अहिले पनि समाजले सहज रुपमा पचाउन सकदैन । जुन कुरा हामीले खान्छौ ओकल्दा पनि त्यहि कुरा नै ओकलिने हो । यहाँ पनि त्यहि लागु हुन्छ । छोरीहरुलाई बच्चा देखिनै तिमी विवाह गरेपछि अर्कैको हुन्छौ तिम्रो थर गोत्र सबै परिवर्तन हुन्छ भन्दै सिकाइएको छ जसले गर्दा थर परिवर्तन लाई अहिले महिला अधिकारका कुरा गरेर नथाकने महिलाहरुले पनि सहज रुपमा परिवर्तन गरेका छन् केहि औलामा गन्ने महिला बाहेक । पहिचान खोज्ने हामी महिलाहरुले नै आफ्नो बनेको पहिचान लाई परिवर्तन गरेर नयाँ पहिचान बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छौ के यो सहि हो त ? सामाजिक रुपमा मानिएका कुरा सबै सहि र सबै गलत पनि हुन्नन् । हाम्रो समाज अझै पनि लैङ्गिक समानताको कुरामा त्यति उदारवादी देखिदैन । तर यसलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मा स्वमं महिलाको पनि हो ।